ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သူဘယ်သူလဲ”
The best jokes of the year .
ကျနော်ထင်တော့ထင်နေတယ်၊ ဒါကျောက်ဆည်ဆင်ကို ဝှက်တာနေမှာပါလို့.. ဟိဟိ..
ကိုပေါ ပဟေဠိခေါင်းစဉ် စဉ်းစားမိတာ ကံကောင်းလို့ပဲဟင်းနဲ့စားရတော့မလို့ . ..ကံသီပေလို့ ...ကျောက်ဆည်ဆင်ရယ်...
ကိုပီတာ.... ဒါမျိုးလေးတွေ ကြိုက်တယ်ပေါ့လေ။
ကိုတီဇက်အေ....ဟိဟိ ဆိုတာက မရိုးသားဘူးနော်။ အကြည်ညိုပျက်မှုနဲ့ ပုဒ်မ တပ်လို့ရသေးတယ်နော။
နေနေ........ ပဲဟင်းမည်ကာမတ္တပါ။ အနှစ်တွေက ထောင်မှူးယူပြီး ရောင်းစားလိုက်တယ်။
ကိုပေါ... ကိုပေါ။ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ :D
ဟိဟိ လို့တောင်ရီရဲတော့ဘူး... အကြည်ညိုပျက်မှုဆိုလို့။
အထင်မှားနေသေးတယ် ။ ဗလအားကိုး ဆိုတော့ပြန်ပြီး တွေဝေသွားတယ်...သူက အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေပါပြီ ဆိုပြီး..
အဲလေ..ငါဘာတွေပြောမိပါလိမ့်....သူဆိုတာ တို့အိမ်က အဖွားကိုပြောတာ..... ပေါက်ကရလျှောက်မတွေးနဲ့....ဟွန့်...ဒါပဲ
s0wha1......စားလည်း ဒီစိတ်ကွယ်။ သွားလည်း ဒီစိတ်ကွယ်။ သူ့ကိုသာ စွဲလန်းမိတယ်။ ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲကလိုပေါ့။း-)
ဆင်ဒဏ်လား.... အိမ်ကအဖွားလည်း မရဘူး။ ဒီပို့စ်မှာ ၀င်မှတ်ချက်ပေးကတည်းက အီလက်ထရောနစ်အက်ဥပဒေနဲ့ အကျုံးဝင်သွားပြီ....ဟိဟိ
မှတ်ချက်မပေးဘူး. လုံးဝ ၀င်မပါဘူး.. ဒါပဲ
ပန်ဒိုရာ...... ဒီလိုရရိုးလား။ ၀င်မပါလည်း ဘေးကရပ်ကြည့်မှုနဲ့ စွဲလို့ရသေး၏။
ကမောင်ရင်...... ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာပါလားဗျိုး။ “ကျောက်ဆည်ဆင်ကို ကြောက်တယ်မထင်က...” ဆိုပါလား။ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဆိုတဲ့ နာမ၀ိသေသနပုဒ်ကလေးလည်း ကြိုက်တယ်ဗျိုး။ ဦးပေါ်ဦးကိုတောင် ပြေးသတိရမိတယ်။
ခြင်္သေ့ကြီးတွေကတော့ကွာ......ဆိုပြီး ဘုရင့်အစီအမံနဲ့ ထွင်းထုထားတဲ့ ပန်းရန်လက်ရာ ခြင်္သေ့ရုပ်ကြီးတွေကို ရယ်သွမ်းသွေးမလို့ရှိတုန်း ဘုရင်က အကွယ်ကနေ သံလျက်နဲ့ထွက်လာပြီး....ပေါ်ဦး ဆက်ပြောစမ်း။ နင် ငါ့ခြင်္သေ့ရုပ်တွေကို ဘာအတင်းတုပ်မလို့လဲ....လို့မေးတော့......“မှန်ပါ။ ဘုန်းတော်ကြောင့် ဟိုဖက်ကမ်းကို ခုန်ကူးတော့မယ့်အတိုင်းပါဘဲဘုရား” ဆိုတာ ကျနေတာဘဲ။
ko paw နှင့် ကိုမောင်ရင် တို့ရဲ့
Very good poems of Ko Paw and Ko M.Y.
ကေကေ….. အဖြေရော ညှိသွားဖြစ်သေးလား။
ကိုရွှေအောင်……… ဆင်ကြီးကယ်တာ ကြိုက်ရင် အောက်မှာ ဆင်နဲ့ ပတ်သက်သမျှ ချရေးပေးလိုက်တယ်။ အရေးကြုံရင် ယူသုံးလို့ရအောင်။
ဆင်ကန်းတောတိုး၊ ဆင်ကြံကြံ။ ဆင်ကြည့်ကြည့်။ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်။ ဆင်ခေါင်းခွေးမချီနိုင်။ ဆင်သေကို ဆိတ်သားရေနဲ့ဖုံး။ ဆင့်ပါးစပ်နှမ်းပက်။ ဆင်ဖြူတော်မှီ ကြံစုပ်။ဆင်ပြောင်ကြီးသွားရာ ဆင်မယဉ်သာ လိုက်ပါရမြဲ။ ဆင်လည်းဆင့်အထွာ ဆိတ်လည်းဆိတ်အထွာနဲ့။ ဆင်သွားရင်လမ်းဖြစ်။ ဆင်ကျီစားရာ ဆိတ်မခံသာ။ စိတ်ဆင်ရိုင်းကို ချွန်းနဲ့အုပ်။ ဆင်ပိန် ကျွဲလောက်။ ဆင့်ဟိုဒင်း ခွေးမျှော်။ ဆင်စီးပြီး မြင်းရံ။ အမြင်မတော် ဆင်တော်နဲ့ခလောက်။ ဆင်ဖိုးထက် ချွန်းဖိုးကြီး။ အိပ်လို့ရယ်မပျော် ဆင်အော်လို့မနိုး။
အနှစ် ၁၀၀၀ ကျလဲ ကျပါစေတော့..
ကိုမောင်ရင့် ကဗျာလေးတော့ ကြိုက်ပါ့ရှင်။
ပျောက်နေတာ အတော်ကြာ၊ စီပုံးလည်း မတွေ့လို့ ဒီလာပြောတာ...:P:P